Tattozy tanamasoandro sy ny dikany | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy Sunflower sy ny dikany
Antonio Fdez | | Tatoazy voninkazo sy zavamaniry
Fantatra amin'ny anarana hoe "mirasoles" na "jáquimas", nefa tsy isalasalana fa ny voninkazo mainamasoandro dia iray amin'ireo zavamaniry malaza sy tsara indrindra hitantsika eo amin'ny natiora. Ny voninkazo tsy manam-paharoa sy ny mampiavaka ny fanarahana ny masoandro mba hahazoana ny taratra taratra jiro voajanahary faran'izay betsaka, dia ataovy iray amin'ireo zavamaniry tsara tarehy indrindra ity. Na izany aza, Ahoana ny amin'ny tatoazy tanamasoandro? Araka ny lazaintsika, satria iray amin'ireo zavamaniry sy voninkazo malaza indrindra, ity laza ity dia nafindra tamin'ny tontolon'ny tatoazy.
Matetika ny tatoazy tanamasoandro. Ary amin'ny ampahany dia noho ny dikany mahafinaritra ary koa ny tandindona omena ny tanamasoandro. Fantatrao ve ny dikan'ny tatoazy tanamasoandro? Mandritra an'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny dikan'izy ireo raha asehonay anao ny karazana endrika tatoazy izay ahafahanao maka hevitra amin'ny tatoazy sunflower anao manaraka.
Ny tanamasoandro dia karazana zavamaniry ahitra ary zanatany amin'ny kaontinanta amerikana. Namboly nandritra ny taona maro izy ireo ary androany dia hitantsika manerana an'izao tontolo izao izy ireo. Indrindra ho an'ny sakafo tena tsara. Tamin'ny andro taloha, ny tanamasoandro dia nampiasaina hanomanana menaka noho ny fananana mahasoa ara-pahasalamana. Ho fanampin'izany, ny voany dia sakafo matsiro mahafinaritra ho an'ny rehetra. Eny, miresaka momba ny "fantsona" an'ny tanamasoandro aho.
Etsy ankilany ary mankafy ny dikany, ny tanamasoandro dia manana tandindona mifandray amin'ny fanantenana, finoana ary fifaliana. Ho an'ny kolontsaina sasany (indrindra ny Indianina Amerikanina tera-tany) dia mifamatotra amin'ny finoana ara-panahy, fiankohofana ary fahaizana misambotra sy mifoka angovo tsara. Ary raha miroso amin'ny kolontsaina sinoa isika dia misolotena ny mirary soa, faharetana ary fahavelomana. Ankoatr'izay, noho ny lokony mavo mampiavaka azy, ho an'ny Sinoa dia maneho ny lokon'ny fiainana sy ny faharanitan-tsaina. Izy io koa dia mifandray amin'ny fahasambarana.
Raha fintinina dia mahita tatoazy tena mahaliana izahay, izay hitanao eo amin'ny galeriana etsy ambany, dia tsara ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy. Mazava ho azy, ny famolavolana tatoazy ary koa raha misafidy ny hanao izany amin'ny loko na mainty isika dia ho anton'izany. Ary ianao, Ahoana ny hevitrao momba ny tatoazy tanamasoandro? Raha manana ianao dia tianay ho fantatra ny hevitrao.
Sarin'ny Tattozy Sunflower
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy voninkazo sy zavamaniry » Tatoazy Sunflower sy ny dikany
Ny fanakonana momba ny tatoazy sarin'ny vadiny taloha izay efa nalaza be
Tatoazy kintana amin'ny soroka